Ciidanka nabadsugida dowlada federaalka Soomaaliya oo Muqdisho ku qabtay gaari ay saarnaayeen walxaha qarxa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandCiidanka nabadsugida dowlada federaalka Soomaaliya oo Muqdisho ku qabtay gaari ay saarnaayeen walxaha qarxa
July 24, 2016 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada nabadsugida dowlada federaalka Soomaaliya “Nisa” ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay gaari ay saarnaayeen walxaha qarxa.
Gaariga oo noociisa yahay Toyota Noah ayaa lagu baakimay mid kamid ah wadooyinka waa-weyn ee degmada Boon-dheere ee caasimada Soomaaliya, Muqdisho, sida ay sheegeen saraakiisha Nisa.
Waxyaalaha qarxa oo gaariga saarnaa. Radio Muqdisho.
Ciidamada Nisa ayaa horey u fashiliyay baabuur walxaha qarxa laga soo buuxshay oo la doonayay in loo adeegsado weeraro argagixiso.
Kooxda al-Shabaab ayaa u adeegsada qaraxyada baabuurta weerarada ay ka fuliyaan gudaha Muqdisho.